Na-ezube ịnabata njikọ aka na nnukwu ụzọ? Enwere ọtụtụ echiche ndị ụlọ ọrụ anaghị atụ anya ma ọ bụ rụọ ọrụ iji bulie atụmatụ ha. Gbalia ige nti na ntuziaka ndia:
Social Media - Site na ikike nbanye site na mkpanaka, na ntinye ngwa, na mmekọrịta mmadụ na ibe, mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ nnukwu ihe na ojiji ekwentị. Ihe ịga nke ọma kachasị nke usoro ntinye aka na-adabere n'ichepụta ọrụ azụmahịa iji gbochie ndụ ndị ahịa ma ọ bụ ọrụ kwa ụbọchị.
Obodo - SOMOLO abụghị naanị jargon ụlọ ọrụ, Obodo mkpanaka mpaghara na-akọwa ngwa ngwa na-eto ngwa ngwa yana edemede aka na ụlọ ọrụ ekwentị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị abụghị mpaghara, n'ụzọ ụfọdụ ijikọ ọdịdị ala n'ime usoro mkpanaka gị nwere ike ịchụpụ ọtụtụ ọrụ.
email - Yahoo! na-akọ na 20% nke ndị ọbịa niile na-eleta ugbu a na ekwentị mkpanaaka… ma anyị maara nke ahụ email mkpanaka emeghe ọnụego na-eru nso ugboro abụọ na. Ọ bụrụ na ịnọghị emebe email gị maka obere ihuenyo, na opekata mpe folks na-agaghị agụ… na njọ… ha nwere ike ịbụ wepu aha na.
Mobile Apps - echefula otu ngwa ndị ọzọ a na-eji agagharị agagharị dị, dị ka Facebook, Youtube, Ngwa foto, Egwu Egwu, Geolocation, wdg. Ratingmekọrịta ngwa ndị ọzọ na ngwa gị nwere ike ị nweta gị ọnụego ngwa ngwa ma ọ bụrụ na emechara ya nke ọma!
Security - Ndị na-agba ọsọ na-agha ọgụ mgbe niile iji wakpo smart phones, yana onye na-eji ihe ngwangwa eme ihe na ngwa ụlọ ọrụ gị ịgbanye malware na smart ekwentị bụ ihe ikpeazụ ịchọrọ.